> Resource > Free > Top 5 Best Free MOV Video Rotators
Iyadoo u kaca ee videos smartphone-qabtay, waxay u badan tahay in ay soo gaarto videos in la duubay dhinac aad. Tani waxay ka dhigi kartaa arkaysid adag. Nasiib wanaag, qoqobada aad video waa SNAP ah haddii aad doorato mid ka mid ah hogaanka 5 free video MOV hoos ku rotators.
1.0.7 Video Rotator
Version casriyayn ee Movie Rotator saamaxaya kuwa isticmaala si loogu badalo filimada iyo filimada galay hab sawirka ka muuqaalka, ama bilcaksii. Waa kaamil ah loogu socon qaabab file MOV gal qalabka gacanta qabtay si aad u daawan kartaa filimada waxaa raaxada. Movie Rotator 2.0 waa si gaar ah loogu talagalay dadka in ay la casriyeeyay nidaamyada hawlgalka ay u Windows 7 ama 8. Haddii weli aad isticmaalaya XP ama Vista waa in aad ku eekaan version hore.
Taageerayaan qaabab video xadidan yihiin;
Rotator Tani waxa ay macne u guuraan kartaa dhaqaaqo yeellay, at 90 darajo, ama idiinku beddelin filim sida aad raadinayso waxa at muraayad. Waxa ay taageertaa qaabab badan oo dhan in ka badan Movie Rotator iyo xitaa taageeri kartaa iPhone, iPod Touch ama iPad iyo sidoo kale MOV, MP4 iyo file wmv qaababkan caadiga ah. Video Rotator 1.0.7 kartaa xataa taageertaa flipping tiro videos, sidaa darteed haddii aad leedahay 50 ama in ka badan in ay sameeyaan, waa iyaga oo dhan isku shaandheyn doonaa.
Toos ah iyo si sahlan loo isticmaalo.
Burburtay mararka qaarkood.
Waxa aan jeclaa oo ku saabsan beddesha Video ahayd awood u leh inay isku shaandheyn at kaliya xagal kasta, iyada oo mid ka mid click fudud ee aad mouse. Waxa ay taageertaa oo dhan qaabab file weyn oo ay ka mid yihiin Mpg, wmv ama MP4 la magacaabo wax yar iyo waa la yaabka lahaa fudud in la isticmaalo. Khasaare kaliya ee aan ka helay waxay ahayd xad 5MB tirada faylka!
Taageerayaan qaabab video kala duwan;
Looma baahna in la soo bixi.
5MB xadka tirada file.
Kani waa mid aad u fudud of software in ay isticmaalaan oo awood u qof si fudud u beddeli wareeg ah ee filimada aad. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida MOV, AVI, MP4, wmv, MKV, 3GP iyo in ka badan. Marka aad socota waa ay fududahay in la isticmaalo, toos iyo dhibka badnayn.
Aad u fududahay in la isticmaalo iyo interface fudud, software waxan sameeya in ka badan si fudud isku shaandheyn aad videos. Waxa kale oo ay isku shaandheyn doono yaalla oo kuu ogolaanaysa inaad sameeyo qaar ka mid ah tafatirka smart sida falinjeeerka, lana siii, lafdheerta iyo sidoo kale qoqobada. Waa qayb ka mid ah dhan-gabay la, dhan-cayaar qoqobada software sida ay sidoo kale taageertaa tiro aad u badan oo ah qaabab file, oo ay ku jiraan MOV dabcan.
Haddii u baahan tahay in ka badan hawlaha video tafatirka ka sokow warejin, Wondershare Video Editor caawin kara. Tani tafatirka qalab video gelineya inaad si fudud noola, isku shaandheyn, kala, isu geeyo videos sidoo kale ku darto saamaynta video gaar ah daqiiqo. Download oo ay tijaabiyaan.